Allgedo.com » War-Murtiyeedka Shirka Wadatashiga, Gorfeynta Khilaafaadka iyo Horumarinta Nabadda ee Degmooyinka Gobolka Gedo (Sawirro)
War-Murtiyeedka Shirka Wadatashiga, Gorfeynta Khilaafaadka iyo Horumarinta Nabadda ee Degmooyinka Gobolka Gedo (Sawirro)
Doolow, Somalia (AOL) – Qeybaha kala duwan ee bulshada, oo muddo 5-maalmood ah ku shirayay degmada Dooloow, ayaa soo saaray go’aanno ku aadan xalinta khilaafaadka, nabadda iyo dib u heshiisiinta degmooyinka ay matalayeen ee gobolka Gedo.
Shirkan, oo ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland, oo uu horkacayay wasiir ku xigeenka, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, iyadoo uu shirka furay Wasiirka Madaxtooyada Jubbaland, Mudane Axmed Cabdiraxmaan Xasan, oo ku guubaabiyay ka qeybgalayaasha in ay ka faa’iideystaan oo fikirkooda ku darsadaan casharada iyo doodaha la xiriira xalinta khilaafaadka iyo dib u heshiisiinta.
Shirkan, waxaa kaloo ka qeybgalay Guddoomiye ku xigeenka gobolka Gedo, Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qadi, Guddoomiyayaasha iyo Ergooyinka ka kala socday degmooyinka Baardheere, Luuq, Dooloow, Beled-Xaawo iyo Ceel-Waaq.
Ka qeybgalayaasha shirka Wadatashiga, Gorfeynta Khilaafaadka, Nabadda iyo Dib u Heshiisiinta, waxay ka doodeen qodobada hoos ku qoran:
Ka qeybgalayaasha, ayaa kulammo gaargaar ah ugu lafoguray qaababka xog uruurinta khilaafyada heer degmo, tiirarka iyo kaabayaasha Nabadda, kana dooday xalalka khilaafyada cayiman iyo kala horeysiintooda, oo ergooyinka degmooyinku ay natiijada gorfeyntooda ku soo bandhigeen shirka.
Dood iyo falanqeyn dheer kadib, waxaa ka qeybgalayaashu, isla garteen qodobada soo socda:
In meel looga soo wada jeesto, loolana dagaalamo kooxda nabad-diidka ah ee Al Shabaab.